Izvi ndizvo zvazvinoda kutenga iyo iPhone pasirese | IPhone nhau
Kutenga iPhone hakuwanzo kudhura. Apple's smartphone inopfuura kungoita mudziyo, uye izvo zvinobhadharwa. Chirevo chakanaka kune izvi ikambani yekupedzisira terevhizheni yekambani iyo sirogani yacho inoti: "Kana isiri iyo iPhone, haisi iPhone." Zvisinei, kune nyika uko kuri yakachipa pane kune mamwe kuti uwane unit yeichi chishandiso, kwete zvakanyanya nekuda kwekusiyana kwemutengo, asi nekuda kweavhareji yemari yevanhu vari munyika dziri kutaurwa.
Tinogona kuona kuti pane musiyano mukuru sei mumutengo wechigadzirwa kana tichienzanisa zvakanyanyisa: muUnited States mutengo weiyo iPhone uri $ 649, nepo kuBrazil ichiita $ 1107. Musiyano unooneka, hapana mubvunzo, asi uyo unowedzerwa, sezvatinotaura, neavhareji yemari yemhuri dzenyika. Iyo infographic inoratidza zvakajeka muenzaniso weIndonesia, kupi iyo iPhone inoverengera 39% yemari yegore yemhuri yepakati, nepo iri muUnited States iri 1,6%. Kana chii chakafanana: muIndonesia mhuri yaigona kutenga maPhones maviri pagore, nepo kuUnited States zvikamu zvacho zvinosvika makumi matanhatu nematatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6 » Zvinodhura zvakadii uye zvine pundutso zvakadii kutenga iyo iPhone 6? [Global infographic]
Ricardo Gwayana akadaro
MuCosta Rica inodhura angangoita $ 1.300
Pindura Ricardo Cordero
Zvakanaka, pano kutenga iyo ichangoburwa iPhone ine 32 kana 64 GB inoda kutora 50% yemubhadharo wangu = / chokwadi chingave icho humbozha hwaizova hwangu makore ese matatu, kwete gore rega. kana kutengesa yauinayo wobva wawedzera iyo yasara, asi kanoni yakadzikiswa
Kukanganisa Ricardo, muCosta Rica, kwakatengwa kuICE, mitengo yacho yaizove ¢ 420 (approx. $ 000) ye780Gb uye ¢ 16 (approx. $ 485) ye000Gb uye kune mimwe mitengo yakaderera mumusika wepachena.
Ongorora: 1 dhora = 539 macoloni
Mauricio Cardenas akadaro
Muno muParaguay (South America) ndatenga yangu iPhone 6 yemutengo we $ 442 kubva kune anoshanda nhare (Tigo), asi kana iwe ukaitenga kubva kuchitoro chefoni, komputa mutengo wacho unosvika madhora mazana manomwe.
Izvo zvinokanganisa ndezvekuti kubva kune anoshanda mafoni akavharirwa uye anongoshanda neanoshanda uye zvinoda mari yakawanda kuvhura ivo, zvisinei vamwe vakasununguka kubva kufekitori.
Pindura Mauricio Cardenas
Walter lopez akadaro
MuEl Salvador inodhura $ 1200 nepakeji nyowani yakajeka.
Pindura kuna Walter Lopez
MuCOLOMBIA iyo 6GB iPhone 16 inodhura yakatenderedza 675 madhora; nepo iphone 5s ye16gb ine kukosha kwemadhora mazana matanhatu nemakumi matanhatu nenomwe.
Nyowani, yemahara yakatengwa mumall !!
Jose Luis Palao akadaro
Chinyorwa chakadii. Hazvina basa kuti udonhedze cherry kuti uzive kuti zvichienderana nemari yenyika imwe neimwe zvinobatsira zvakanyanya kana kusawana iyo iPhone. Musoro wechinyorwa unoita zvakawandisa.
Pindura José Luis Palao
KuArgentina unofanirwa kuenda kumusika unowirirana kuti utore iPhone. uye inodhura yakawanda kana isingasviki madhora zviuru zviviri pamutengo wepamutemo.
Pano muarg. Izvo zvese zvinodhura uye zvakare zvakanyanya kuomarara kuwana yakadaro yepamusoro-yekupedzisira chigadzirwa. Ini ndinoramba ndichitsvaga kudzoka kwemaitiro ekutenga iyo iPhone 6 kuwedzera 32gb pasina kubhadhara kupenga, izvo chete zvakakosha.
Zvakanaka, zvinoda kuti iwe uwane mari yakawanda kuti uzviwane nekuti kana iyo 6 kana iyo 6 yekuwedzera haina kubuda mu32gb
Iyo mitambo yakanakisa yaAugust 2015